PowerPoint မှာ ပုံတွေကို Group ဘယ်လိုဖွဲ့မလည်း
30 May 2017 . 11:58 AM
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ PowerPoint မှာ ပုံအများကြီးကို တစ်နေရာတည်းဖြစ်အောင် Group ဘယ်လိုဖွဲ့မလည်း ဆိုတာကိုအခရာပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ PowerPoint ကိုသုံးပြီး Presentation လုပ်တာတို့ ကျောင်းအိမ်စာလုပ်တာတို့ဆိုရင် အဆင်ပြေတာပေါ့။
PowerPoint မှာပုံထည့်မယ်ဆိုရင် Pictures ၊ Online Pictures ၊ Screenshot နဲ့ Photo Album ကနေတဆင့် အသုံးပြုချင်တဲ့ ပုံတွေကိုထည့်နိုင်ပါတယ်။ ပုံတွေအများကြီးကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Image ထဲက Insert Tab ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ ပုံတွေကိုရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ပုံအများကြီးကို တစ်စုတည်းဖြစ်အောင် Group ဘယ်လိုဖွဲ့လည်းကြည့်လိုက်ရအောင်။ အခုပြထားတဲ့ပုံမှာ အသုံးပြုထားတာကတော့ Office 2007 နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
၁. Group ဖွဲ့ချင်တဲ့ ပုံတွေကိုအရင်ရွေးပါ။ ရွေးပြီးရင် Insert ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို PowerPoint ထဲမှာ ရွေးထားတဲ့ပုံအကုန်လုံး Selection ၀င်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
၂. ပြီးရင်တော့ Format ထဲက Group ကိုရွေးပါ။ တကယ်လို့ သင်က PowerPoint 2010 ကို အသုံးပြုနေတာဆိုရင်တော့ Format ထဲက Arrange ထဲက Group ကိုရွေးပါ။
၃. Group ကိုရွေုးလိုက်တာနဲ့ Select လုပ်ထားတဲ့ ပုံတွေ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖြစ်တာကိုမြင်ရမှာပါ။ Group ဖြစ်သွားတဲ့ပုံတွေကို ပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆော့ Click နှစ်ချက် နှိပ်ပြီး စိတ်တိုင်းကျ ရွှေ့နိုင်ပါသေးတယ်။
၄. Group ဖွဲ့ထားတာပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Format ထဲက Ungroup ကိုကလစ်တစ်ချက် နှိပ်ပြီး ဖြူတ်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ ………….
Ref : Learning Powerpoint